भाेलिबाट लामो दूरीका गाडी सञ्चालन, कस्ता छन् नियम? - Everest Dainik - News from Nepal
भाेलिबाट लामो दूरीका गाडी सञ्चालन, कस्ता छन् नियम?
काठमाडौं : झण्डै ६ महिनादेखि थन्किएका मध्यम र लामो रूटका बस सञ्चालनका लागि तयारी भइसकेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
यातायात व्यवसायी र चालक महासङ्घ सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले भोलिबाट बस सञ्चालनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलले सबै चालक, सहचालक र यात्रुलाई सवारीसाधनमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस बसको टिकट लिन बिहान ३ बजेदेखि लाइन
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले असोज १ देखि लामो रुटको बस सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो । यी सवारीसाधनले सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर साविक भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिएर यात्रा गराउनु पर्नेछ ।
ट्याग्स: बस, लामो दूरी